I-DNA Replication Process kunye neNyathelo
Kutheni iphendula iDNA?
I-DNA yinto yokuvelisa i-genetic echaza yonke iseli. Ngaphambi kokuphindaphinda kweseli kwaye ihlukaniswe yintsholongwane entsha yamanzi ngokusebenzisa i- mitosis okanye i- meiosis , i-biololecules kunye ne- organelles kufuneka ikopishwe ukuba isasazwe phakathi kweeseli. I-DNA, efunyenwe ngaphakathi kwisucleus , kufuneka iphindwe ukuze kuqinisekiswe ukuba iseli ngalinye elitsha lifumana inani elichanekileyo lama- chromosomes . Inkqubo yokuphindaphinda i-DNA ibizwa ngokuba yi- DNA replication . Ukuphendulela kulandela amanyathelo athile afaka amaprotheni amaninzi abizwa ngokuba yi-enzymes yokuziphendulela kunye ne- RNA . Kwiiseli ze-eukaryotic, ezifana neeseli zezilwanyana kunye neeseli zezityalo , ukuphindaphinda kwe-DNA kubonakala kwisigaba S so-interphase ngexesha lomjikelezo weseli . Inkqubo yokuphindaphinda i-DNA ibalulekile ekukhuleni kweeseli, ukulungiswa kunye nokuvelisa kwizinto eziphilayo.
I-DNA okanye i-deoxyribonucleic acid ihlobo le-molecule eyaziwa njenge- nucleic acid . Iqukethe i-5-carbon deoxyribose ishukela, i-phosphate, kunye ne-nitrogenous base. I-DNA ephindwe kabini iqukethe ezimbini zetambo ze-nucleic acid eziphoswe zibe yimilo ephindwe kabini . Ukuphazamiseka kukuvumela i-DNA ukuba ifuthe. Ukuze kulungele ngaphakathi kwisucley, i-DNA ixutywe kwizakhiwo eziqiniweyo ezibizwa nge- chromatin . I-Chromatin iyakhupha ukwenza ama- chromosomes ngexesha lokuhlukana kweseli. Ngaphambi kokuphindaphinda kwe-DNA, i-chromatin iyakhupha ukunikezela kwamashishini okuphindaphinda kwi-DNA.
I-EQUINOX GRAPHICS / I-Photo Photo Library / i-Getty Izithombe
Inyathelo 1: Ukuziphendulela iFom Form Formation
Ngaphambi kokuba i-DNA ihlaziywe, i-molecule ephindiweyo ephindwe kabini imele ibe "i-unzipped" kwimigqa emibini. I-DNA ineziseko ezine ezibizwa ngokuthi i- adenine (A) , i- thymine (T) , i- cytosine (C) kunye ne- guanine (G) eyenza iibini eziphakathi kwamacandelo amabini. I-Adenine kuphela iibini kunye ne-cytosine kuphela ebopha kunye ne-guanine. Ukuze uhlaziye i-DNA, le ntsebenziswano phakathi kweebini zombini kufuneka iphulwe. Oku kwenziwa nge-enzyme eyaziwa njenge-DNA helicase . I-helicase ye-DNA iphazamisa ukuhlanganiswa kwe-hydrogen phakathi kweebini zombini ukuhlukanisa imida ibe yinto ebizwa ngokuba yi- fork replication . Le ndawo iya kuba itemplate yokuphindaphinda ukuqala.
I-DNA ibhekiselele kumabini omabini, okuboniswa ngo-5 'no-3' ekupheleni. Le nkcazo ibonisa ukuba yiliphi iqela elincinane lidibanisa i-DNA backbone. Isiphetho sesi-5 sineqela le-phosphate (P) eliqhotyoshelweyo, ngelixa ekupheleni kuka - 3 kunomlinganiselo we-hydroxyl (OH). Olu luleka lubalulekile ekuphenduleni njengoko luqhubeka kuphela kwi-5 'ukuya ku-3'. Nangona kunjalo, i-fork yokuphindaphinda i-bi-directional; I-strand enye ijoliswe kwi-3 'ukuya kwele-5' isalathiso (i-strand ehamba phambili) ngelixa elinye lijoliswe ku-5 'ukuya ku-3' (i-strand ye-strand) . Amacandelo amabini ngoko aphindaphindiwe kunye neenkqubo ezimbini ezahlukeneyo ukulungiselela ulwahlulo oluthe ngqo.
Inyathelo 2: Ukuzibophelela kwangaphambili
I-strand ehamba phambili yinto elula ukuyiphendula. Emva kokuba i-DNA ihlukaniswe, i- RNA emfutshane ibizwa ngokuthi i- primer ibophezela ekupheleni kwe-3. I-primer ibopha njalo njengendawo yokuqala yokuphindaphinda. Iziqhumiso zenziwe yi-enzyme DNA primase .
Ukuphindaphinda i-DNA: I-Elongation
Inyathelo lesi-3: Ulungelelaniso
Ii-enzyme ezibizwa ngokuba yi- DNA polymerases zijongene nokudala i-strand entsha ngeenkqubo ezibizwa ngokuba yi-elongation. Kukho iintlobo ezi-5 ezahlukeneyo zeDNA polymerases kwiibhaktheriya kunye neeseli zomntu . Kwiibhaktheriya ezinjenge- E. coli , i- polymase III iyona nto i-enzyme yokuphindaphinda, ngelixa i-polymerase I, ii-II, IV ne-V zijongene nephutha lokuhlola nokulungisa. I-DNA polymerase III ibopha kwi-strand kwisiza se-primer kwaye iqala ukudibanisa iibini ezisezantsi zoluhlu oluxhasayo kwi-strand ngexesha lokuphindaphinda. Kwiiseli ze-eukaryotic , i-polymerases i-alpha, i-delta, kunye ne-epsilon yiyona iipolymerase eziphambili ezibandakanyeka ukuphindaphinda kwe-DNA. Kungenxa yokuba ukuphindaphinda kuqhubeka kwi-5 'ukuya ku-3' isalathiso kwicandelo elikhokelayo, iqhosha elitsha elitsha lisoloko liqhubeka.
I- strand yokusila iqala ukuphindaphinda ngokubopha ngeendidi ezininzi. I-primer nganye isiseko esisodwa kuphela. I-DNA polymerase idibanisa i-DNA, ebizwa ngokuba yi- Okazaki fragments , kwi-strand phakathi kwamagqabi. Le nkqubo yokuphindaphinda iyanqanyulwa njengoko iziqwenga ezitsha zidibeneyo.
Inyathelo 4: Ukupheliswa
Emva kokuba zombini i-strings eqhubekayo neyokuyeka, i-enzyme ebizwa ngokuthi i- exonuclease isusa zonke i-RNA eziqhawulayo emacaleni okuqala. Ezi ziqalo zitshintshwa ngokutsha kunye neziseko ezifanelekileyo. Olunye u-exonuclease "uphononongo" i-DNA esanda kuqulunqwa ukujonga, ukususa nokutshintsha nayiphina impazamo. Enye enye i-enzyme ebizwa ngokuthi i- DNA ligase ihlangene neenxalenye ze-Okazaki kunye kunye nokwenza iqonga elilodwa elihlangeneyo. Iziphelo ze-DNA ehamba phambili zibonisa ingxaki njengoko i-DNA polymerase inokufaka kuphela i-nucleotides kwi-5 'ukuya ku-3'. Iiphelo zomgca womzali ziququzelelwe ngokulandelelana kweDNA okubizwa ngokuba yi-telomeres. I-Telomeres isebenza njengama-caps ekukhuseleni kwama-chromosomes ukukhusela ama-chromosomes asondeleyo ukuba adibanise. Udidi olukhethekileyo lwe-DNA polymerase enzyme ebizwa ngokuba yi- telomerase ikhuthaza ukuhlanganiswa kweendlela ze-telomere ekupheleni kwe-DNA. Emva kokuba kugqityiwe, umgca womzali kunye neenkomfa ze-DNA ezixhasayo kwi-shape helix eyaziwayo. Ekugqibeleni, ukuphindaphinda kuvelisa ezimbini i- DNA molecules , nganye nge-strand enye ukusuka kumlolekyuli womzali kunye ne-strand entsha.
Ifowuni ifowuni / iCultura / Getty Izithombe
Ukuphindaphinda kwe-DNA kwakungeke kwenzeke ngaphandle kwee-enzyme ezenza amanyathelo ahlukeneyo kwinkqubo. Ama-enzyme athatha inxaxheba kwinkqubo yokuphindaphinda i-DNA i-eukaryotic iquka:
I-DNA i-helicase - ivula kwaye ihlukanise iDNA ephindwe kabini njengoko ihamba ngeDNA. Yenza ifom yokuphindaphinda ngokuphula izibopho ze-hydrogen phakathi kweendidi ze-nucleotide kwi-DNA.
I-DNA primase - uhlobo lwe-RNA polymerase eyenza i-RNA inqabileyo. Amagqabantshintshi alamfutshane ama-molecule e-RNA asebenza njengeempendulo zokuqala ukuphindaphinda kwe-DNA.
I-DNA polymerase - yokwenziwa kwee-molecule zeDNA ngokufaka ii-nucleotides ekukhokeleni nasekuncipheni i-DNA.
I-Topoisomerase okanye i-DNA Gyrase - ivula kwaye iphinde iphinde ihlaziye imida ye-DNA ukukhusela i-DNA ukuba ingabonakaliswa okanye ifakwe.
I-Exonucleases - iqela lee-enzymes ezisusa iziseko ze-nucleotide ukusuka ekupheleni kwe-DNA chain.
I-DNA ligase - idibanisa i-DNA iinqununu ngokubumba izibopho ze-phosphodiester phakathi kwama-nucleotides.
I-DNA Ukucaphuna isishwankathelo
UFrancis Leroy, uBIOCOSMOS / iSayensi yeThala leLayibrari / i-Getty Izithombe
Ukuphindaphinda kwe-DNA kukuveliswa kweefayile zeDNA ezifanayo kwi- DNA ephindwe kabini. I-molecule ngayinye iqulethe iqhosha elivela kwi-molecule yokuqala kunye ne-strand entsha. Ngaphambi kokuphindaphinda, i- DNA iyakhupha kwaye ihluke. I-fork yokuphindaphinda ibunjwa ekhonza njengetemplate yokuphindaphinda. Izinto zokuqala ezibopha kwi-DNA kunye ne-DNA polymase zongeza ukulandelelana kwe-nucleotide entsha kwi-5 'ukuya ku-3'. Oku kongezwayo kuqhubeka kwi-strand ehamba phambili kwaye yahlukana kwi-strand yokubamba. Emva kokuba i-DNA idibeneyo, iimpawu zihlolwe iimpazamo, zilungiswe, kwaye ukulandelwa kwe-telomere kufakwe kwiiphelo ze-DNA.
Ziqhelise ekugqibeleni iziGqeba ezithintekayo
Iingoma eziphambili zeFresh Spring Fling
Izihloko kwiShakespeare's 'The Rape of Lucrece'
Igalari yeSithombe se-Queen Anne Architecture
Imbali yeCoptic yobuKristu
Ukuzamazama komhlaba kusebenza njani
Teenage Slang yaseJamani
IiNcwadana ezineemibuzo yokugcina iMemori yeeNtsapho